MURUGO: Geerida Saaxiibka Halyeygii Reer Brazil Ee Romario Oo Lasoo Sheegay, Meydkiisa Oo Laga Helay Waddo Iyo Brazil Oo Tacsi Ka Socoto | Warmaalnews.com
MURUGO: Geerida Saaxiibka Halyeygii Reer Brazil Ee Romario Oo Lasoo Sheegay, Meydkiisa Oo Laga Helay Waddo Iyo Brazil Oo Tacsi Ka Socoto
Dunida kubadda cagta ayaa saaka u barooranayasa laacib hore uga fadhiistay ciyaaraha oo ku geeriyooday dalka Brazil, kaas oo maydkiisa laga helay waddo ku taalla magaalada Sao Paulo ee dalka Brazil.
Maalintii Sabtidii ayaa booliska lagu wargeliyey in mid ka mid ah waddooyinka magaalada Sao Paulo uu yaalla meydka qof rag ah, waxaana markii la geeyey cusbitaalka, gaar ahaan qolka maydka la xaqiijiyey inuu ahaa saaxiibkii Ramario ee ay kubadda wada ciyaari jireen, kaas oo la odhan jiray Valdiram Caetano de Morais oo ay da’diisu ahayd 36 sannadood.
Wali lama sheegin waxa sababay dhimashada Valdiram, hase yeeshee waxa uu ku dhashay magaalada Pernambuco, waxaana uu ku biiray kooxda Vasco de Gama oo 13 sannadood ka hor uu ka ahaa halyey lama taabtaan ah iyagoo iska dhinac ciyaari jiray Romario, waxaana uu kaga fadhiistay ciyaaraha isla kooxdaas.
Sannadkii 2006, waxa uu Valdiram ahaa ciyaartoyga ugu goolasha badan horyaalka waddanka Brazil, laakiin inuu sii wato xirfaddiisa kubadda cagta waxa si kadis ah u joojiyey dabeecaddiisa xun iyo akhlaaqdiisa oo waan wanaagsanayn, taas oo sababtay in warbaahinta dalka Brazil ay ugu yeedhaan magaca ah ‘Bad Boy’.
Intii uu xirfaddiisa ku jiray oo ahayd illaa laga soo gaadhayey sannadkii 2011, waxa uu usoo ciyaaray in ka badan 18 kooxood, waxaana sannadkii 2017 uu fursad ka helay kooxda Atlantico de Bahia, laakiin markii uu hal kulan oo kaliya u ciyaaray waxay isku dhaceen tababaraha oo ay gacan isku qaadeen, waxaana loo diray kooxda heerka labaad.
Nasiib-darro, dabeecaddiisa iyo balwadaha uu lahaa ayaa noloshiisa dib u dhigtay, waxaana uu isku beddelay budhcad dhaca guryaha ciyaaryahannada ay saaxiibbada yihiin amaba ay isku kooxda yihiin.
Bilowga sannadkii 2018, Valdiram ayaa lagu arkay isaga oo ku nool dariiqyada, waxaana gurmad u fidisay kooxdiisii hore ee Vasco de Gama oo waaxda Arrimaha bulshada ee Brazil ka codsatay inay gacan qabato, si noloshiisa dib loogu soo dhiso, laakiin taasi kuma filnaanin in noloshiisa la badbaadiyo.
Bishii June 2018, ayaa mar kaliya la waayey muuqaalkiisa iyadoo ay meel fiican u marayso daaweynta iyo dibu-soo dhiska noloshiisa, waxaanu dib ugu laabtay jidadka oo uu mar kale ka noqday budhcad, iyadoo uu si xad-dhaaf ah u isticmaali jiray maandooriyeyaasha.
Markii ugu dambaysay ee warbaahinta laga arko, waxa uu ahaa muuqaal lasoo geliyey YouTube-ka oo uu kaga codsanayey ciyaaryahannadii ay u wada ciyaari jireen Vasco de Gama inay soo caawiyaan, isagoo si qiiro leh ugu sheegay in aanu haysanin wax lacag ah oo uu ku noolaado.
Ugu dambayn, Sabtidii ayaa maydkiisa laga helay mid ka mid ah waddooyinka Sao Paolo, sida uu sheegay wargeyska Globoesporte na ma jirin hal qof oo ehelladiisa oo u tegay cusbitaalka si uu u aqoonsado.
Sida uu wargeysku sheegay, ciidamada booliska Brazil ayaa xabsiga u taxaabay saddex qof oo la tuhunsan yahay inay dileen, waxaana lagu samaynayaa baadhitaan la xidhiidha kiiska.